Maitiro ekubatirana pane yemahara software chirongwa | Linux Vakapindwa muropa
Maitiro ekubatirana pane yemahara software chirongwa
Pane ino nguva tinoda kugovana newe chinyorwa chatakawana chinonakidza uye kuti chero munhu anofarira icho Free Software inofanira kuverenga. Taona chinyorwa ichi mu rezvinhux.com uye taura nezve maitiro ekubatana pane Mahara Software chirongwa.
ari emahara software mapurojekiti ivo vakachinja nyika ye software. Kuseri kwekuitwa kwemapurojekiti akadaro vanhu vanopa nguva yavo kugadzira matekinoroji akavhurika ayo chero munhu anogona kupa. Iko kune kunyepa kwekutenda kuti kutora chikamu muzvirongwa izvi zvakakosha kuve mukuru programmer kana kuva nenguva yakawanda. Asi kwete. Haisi iyo inotarisirwa.
Tevere, isu tichaenda kukuudza iyo nzira dzakasiyana dzekushandira mune yemahara software chirongwa. Isu tinokuratidza kuti kunyangwe hazvo ivo vanogadzira mazhinji emahara software mapurojekiti vane hunyanzvi muhunyanzvi hwekuronga, isu tinogona zvakare kupa yedu yedu munzira dzakasiyana siyana. Wese munhu anogona kutanga kumwe kunhu.
1 Sangana munharaunda uye ubatsire kuiparadzira
2 Shingairira mukutsvaga uye kugadzirisa kwembugs
3 Shanda pane kodhi yeprojekiti
4 Nyora uye gadzira samples
Sangana munharaunda uye ubatsire kuiparadzira
Vagadziri vanobatana pane yemahara software chirongwa kutaurirana nenharaunda nenzira dzakasiyana: tsamba dzekutumira, mablog kana IRC. Ndosaka zvichikosha, kana tichida kutanga kubatana muchirongwa, tanga wateerera kune zviri kutaurwa uye titumire edu ekutanga mameseji.
Gare gare, tinogona kushanda pamwe navo kukakavara pane tsamba yekutumira, kubatsira ne IRC kune vamwe vanhu vatsva, uye kunyangwe kunyora mamwe mablog blog yeiyo purojekiti iyo inozivisa nharaunda nezvezvinhu zvitsva zvinoshanda kana kupa mienzaniso muzvidzidzo.
Uye kana pachinzvimbo chekuronga isu tichida kugadzira zvimwe, zvirokwazvo mapurogiramu eprojekti achakutendai nekuvabatsira kunatsiridza webhusaiti. Nguva zhinji ivo vakabatikana kugadzira zvinhu zvitsva zvekuti vanokanganwa zvinoonekwa zvewebsite yepamutemo yeprojekti.
Shingairira mukutsvaga uye kugadzirisa kwembugs
Iyo kodhi ndiyo moyo wemahara software mapurojekiti, asi kunyangwe kunyora kodhi ichi chingave chiri chinhu chinonyanya kufadza, inofanirawo kutorwa mupfungwa kuti kugadzirisa uye kugadzirisa matambudziko kunoita kuti mapurojekiti agadzikane.
Zvirongwa zveSoftware zvinowanzove ne tikiti system inoonekwa kuruzhinji. Mupiro wakanaka zvirinani gwaro zvikanganiso izvo zvataurwa. Tinogona kuongorora zvikanganiso, sezvo zvichiwanzo kuve zvisina kunyorwa zvakanaka, saka kana tichikwanisa kuburitsa zvikanganiso zvematikiti uye nekupa rumwe ruzivo kune vanogadzira purojekiti vanozozvikoshesa, sezvo ivo dzimwe nguva vachishandisa imwe nguva vachiedza kutsvaga kwazvinoitika kutadza. kuzvigadzirisa.
Saizvozvowo, zvakare zvakakosha kuvhara matikiti ayo akatogadziriswa. Kucheneswa kwezviitiko, semuenzaniso, kweinopfuura gore iro nekuda kwekukanganwa kuchiri kuvhurwa uye pamwe mune dzimwe shanduro dzakatogadziriswa pamwe chete.
Shanda pane kodhi yeprojekiti
Takasvika padanho rataida isu tese uye apo ma programmers anowanzo kurudzirwa kubatana: nyora nyowani kodhi yeprojekti.
Pamberi pezvose zvakakosha kuti tidzidze manyorerwo azvakanyorwa uye mashandisirwo acho muchirongwa. Isu tinofanirwa kuve nhengo dzakanangana nenharaunda inochengetedza chimiro uye nekuita mukana unoita kuitira kuti vagadziri vane ruzivo vagobatanidza kodhi yedu mubazi guru.
Tinogona kutanga nezvikamu zvisina kuomarara izvo zvisingazonetsa kuti zvibatanidze muchirongwa, senge edza beta vhezheni pamapuratifomu akasiyana. Dzimwe nguva zvinonetsa kutarisa kuti zvese zvinoshanda nemazvo pane akawanda mapuratifomu uye hapana chinofanira kuchinjika, kuti tikwanise kutarisira kuyedza kodhi pane chero epuratifomu yatinoziva.
Tinogona zvakare kuzvipira isu gadzirisa zvikanganisoSezvatakambotaura, kugadzirisa matikiti inzira yakanaka yekusunungura vanogadzira kuti vatarise pane chikuru kufambiswa kwebasa. Kunze kwekuzvinyora, isu tinogona zvakare kutanga kunyora yedu yekutanga kodhi kugadzirisa zvikanganiso izvo isu takawana kana kunyora bvunzo yekodhi seyedzo.
Nyora uye gadzira samples
Iwe unonzwa sei kana iwe ukatanga kutenderera uchitenderera neprojekiti iwe ukaona kuti izvo zvinyorwa zviri kushomeka? Zvakanaka, pamwe iyo zvinyorwa zvakare ipfungwa yakanaka kwatinogona kutanga kubatana. Kugadzira zvimwe zvikamu zvakapfupika kana kunyora matambudziko atakatarisana nawo isu pachedu. Kazhinji zvinyorwa zvinowanzo kuve mumavhiki fomati saka zvichave nyore kwazvo kwatiri kuti tibatanidze yedu kubva panguva yekutanga.
Izvo zvakakoshawo kubatsira gadzira mienzaniso. Kuwanda kwezviitiko zvekushandisa zvine chirongwa, zviri nani. Tinogona kuita mapurojekiti madiki kana maapplication anoratidza nenzira inoshanda mashandisiro esoftware, API kana chero iyo yemahara software chirongwa chine.
Via | rezvinhux.com
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Maitiro ekubatirana pane yemahara software chirongwa
Mupiro wakanaka kwazvo! Yakanaka chinyorwa.